Indlu yePump ebuyiselweyo-iikhilomitha ezi-6 ukusuka ePerth
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguAnnette
Le ndawo yokuhlala ikhethekileyo ekuqaleni yayiyindlu yokumpompa amanzi kwilali yasekuhlaleni kwaye yabuyiselwa ngo-2020. Iimayile ezi-6 nje ukusuka ePerth, le ndlu incinci inikezela ngokufikelela kumaphandle asePerthshire azukileyo. Ngobuninzi bendawo yokupaka yabucala, isitshisi seenkuni, ukufudumeza ngaphantsi kunye nezilungiso zangoku kunye nokufakelwa, Indlu yePump eNdala ibonelela ngendawo yokuhlala egqibeleleyo kubathandi bezinto ezinkulu zangaphandle.
Indlu yePump eNdala inendawo yangoku/ yemizi-mveliso ukubonisa ukusetyenziswa kwayo kwangaphambili kodwa iyindawo ethokomeleyo yokwamkela iindwendwe. Ifudumeza umgangatho ophantsi kunye nesitshisi selogi ngeengokuhlwa ezibandayo kunye nedesika enkulu ene-BBQ yegesi ngeentsuku zasehlotyeni ezifudumeleyo. Inqanaba le-mezzanine eline-headheight ye-130cm ukuphakama, kunye nokufikelela kuphela ngeleli esisigxina, inika indawo ekhethekileyo, yokulala ekhululekile.
Ibekwe emaphandleni amahle, iOld Pump House imi kumgama ozimayile ukusuka kwilali yaseMethven. Imalunga neekhilomitha ezi-6 ukusuka kwisiXeko sasePerth kwaye ibekwe ngokugqibeleleyo kuhambo lwemini ukuya e-Edinburgh, eGlasgow naseDundee.
Umamkeli uya kuba kufutshane.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Methven